कस्ता पापी ! गिट्टी कुटेको पैसा माग्दा पनि कुटेर पठाए
प्रकाशित मिति : २०७४ जेठ १९ शुक्रबार , ३,५३१ पटक हेरिएको
जाजरकोट । गिट्टी कुटेको पैसा माग्दा जाजरकोट त्रिवेणी नलगाड नगरपालिका– ३ टट्टाकी पुतला बुढालाई कुटपिट गरिएको छ । जिल्लाको भेरी नगरपालिका–३ स्थित न्यु महालक्ष्मी कपडा पसलकी मालिक मायादेवी शाहीले उनलाई कुटपिट गरेका हुन् । गिट्टी कुटे वापत रु पाँच हजार मागेपछि अहिले छैन, पछि लैजानु भनेर शाहीले जवाफ दिएका थिए । घरमा खाने एक गेडा अन्न छैन, मलाई रु दुई सय जति भए पनि दिनु भनेर शाहीको अगाडि रोएकी बुढालाई मेरो पसलमा आएर रुने, अशुभ भयो, अव मेरो व्यापार हुँदैन भनि कपडा नाप्ने मिटरले टाउकोमा हिर्काएपछि उनी घाइते भई पसलभित्रै ढल्न पुगेकी थिइन् ।
बेहोस भई लडेकी बुढालाई स्थानीयले उपचारका लागि जिल्ला अस्पतालमा पु¥याएका थिए । भात खाने चामल लिएर आउँछु भनेकी आमा घाइते भएर अस्पतालमा छन् भनेको खबर सुन्दा उनका छोराछोरी रुदै अस्पताल पुगेका थिए ।
जिल्ला अस्पतालमा उपचार हुन नसकेपछि चिकित्सकको सल्लाह बमोजिम बुढालाई थप उपचारका लागि नेपालगन्ज ल्याएको उनका श्रीमान् शक्तिबहादुर बुढाले बताउनुभयो । बुढा दैनिक गिट्टी कुटेर छोराछोरी पाल्ने महिला हुन् । गिट्टी नकुटे उनको चुलो बल्दैन् । उनका श्रीमान् मनबहादुर काठको काम गर्छन् ।
श्रीमती कुटिएको दिन मनबहादुर त्रिवेणी नलगाड नपा– ३ स्थित टट्टा घरमा गएका थिए । आर्थिक अवस्था कमजोर रहेका बुढा दम्पती काम गरेर दैनिक परिवार पाल्दै आएका छन् । काम गरेको पैसा माग्दा उल्टै साहुद्वारा कुटिनुपर्ने अवस्था निन्दनीय भएको स्थानीयको भनाइ छ । रासस
यस्ता छन् जाजरकोट अस्पताल बेहाल बन्नुका कारण
जाजकोटमा ‘मृत्यु’को कथा अर्कै : मृत्यु १३, भाइरलको शंका जम्मा एक जनामा ! (कुराकानीसहित)
जाजरकोटको भाइरस बुद्ध एयर चढेर राजधानी पस्याे : असर गर्ला कि नगर्ला ?
अहिले पनि धामीको भर परेर ज्यान गुमाउँछन् जाजरकोटबासी, चारको मृत्यु
जाजरकोटमा शक्ति बस्नेत भन्दा राजीव विक्रम निकै अगाडि
जाजरकोटमा २४सै घण्टा आकस्मिक प्रसूति शल्यक्रिया सेवा शुरु